Shina: Haintany ratsy indrindra tao anatin’ny 50 taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2009 8:59 GMT
Namely ny 43% n’ny varimbazaha vokarin’ny firenena ny hay tany ratsy indrindra tao anatin’ny 50 taona, izay nipaka hatrany amin’ny faritany 12 sy ny velaran-tany mihoatra ny 9 300 hektara, ao amin’ny faritra avaratry Chine. Nampitandrina ny birao miahy ny faritany sy ny birao avo miady amin’ny haintany fa olona miisa 3 700 000 sy biby fiompy hatrany amin’ny 1 850 000 no tsy mahazo rano fisotro. Nitsidika ny tanan’ny Henan ny praiministra Wen Jiabo ary nanome toromarika ny tompon’andraikitra ao an-toerana mba hametraka ny asa “laharam-pahamehana” ho fanarenana ny simba. Taorina kelin’ny famangiana nataon’I Wen dia nanomboka avy ny rotsak’orana…. Fahagagana ve izany? Angamba, masomboly simikan'ny rahona izy io
Mampiseho ny fivoatran’ny haintany tao amin’ny faritanin’ny Shandong ny horononantsary YouTube:
Noho ny vokatry ny krizy famatsiam-bola, dia betsaka ireo mpila ravin’ahitra no miverina any aminy any ambanivohitra, hanaratsy misimisy kokoa ny fiainan’izy ireo ny haitany ary hipaka hatrany amin’ny fomba fitondran’ny governemanta ny fampandrosoana ny varotra anaty miady amin’ny krizy. Matahotra mafy ny voka-dratsin’ny haitany i badanjilin, mpitoraka bolongana manana ny tantaram-piaianany teny ambanivohitra:
Na dia izany aza manao izay ho afany ny governemanta hiadiana amin'ity haitany ity, raha mitohy toy izao ity toetr’andro ity, dia hisy vokany amin’ny fiakaram-bokatra amin’ny lohataona izany. Noho ny krizy ara-bola dia afaka maminavina isika hoe ho tonga tahaka inona re ny hamafin’ny fiainan’ireo mpamboly eny ambanivohitra e. Tamin’ny taona lasa dia tsara ny toetr’andro, ary nanana ny amby ampy ny tantsaha teo amin’ny famatsiana ny sakafo. Ny asa fanampiny no ahafahan’izy ireo mampidi-bola entina hanatsarana misimisy kokoa ny fiainana. Ankehitriny raha miato ny rotsak’orana, dia hihasarotra ny fiainan’izy ireo. Zanaka mpiompy sy mpamboly aho, ary manana traikefa 2 taona amin’izany. Fantatro tsara ny hamafin’ny fiainana mpamboly sy mpiompy. Ny fambolena sy ny fiompiana no mafy indrindra eo anatrehan’ny asa rehetra. Telo ny olana goavana eny ambanivohitra (fambolena, ny tanana sy ny tantsaha) ao Chine. Noho izany antony izany no amoahan’ny firenena taratasy manome tombotsoa misimisy kokoa ho an’ny tantsaha isan-taona. Kanefa, mbola misy ireo mponina ambanivohitra sasantsasany miaina anatin’ny fahantrana.
Lakandrano sy toro-hevitra amin’ny fiaraha-miasa ambanivohitra
Nanome teboka i Pinklady avy amin'ny Tianya forum anisan’ireo feo nivoaka fa kely loatra ny vola nolanian’ny firenena entina hanatsarana misimisy kokoa ny lakandrano tamin’ny fotoana ara-dalana. Mino ny mpitoraka bolongana fa ny vahaolana an-tampony dia ny fanaovana tsifi-drano ny fitarihan-drano:Fa maninona, raha toa ka nisy fiovan’ny toe-karena tao anatin’ny 30 taona, dia mbola tsy nanamboatra ny fitaritan-drano tsifitsifitra foana isika? Tsy sarotra tanterahana akory anie izany e, ny zavatra ilaintsika dia motera mitroka rano ary fantsona PVC fotsiny. Tsy misy ataon’ny governemanta afatsy ny manome ny tohana ara-bola fotsiny ihany dia hatsangana ny firafitry ny fantsona. Ny fanamboarana ny paompy (motera mitroka rano) sy fantsona dia asa tsisy dikany akory.
Aleo hazavaiko aminareo hoe inona no anton’ny tsy nahatanteraka ny toro-hevitra mikasika io kirafitra io tao amin’ny faritany avaratra. Ny olona fototra dia satria tsifi-drano no rafitra apetraka, tsy ho tanteraka izany ho an’ny fianakaviana iray manana tany kely dia kely. Izay midika hoe tsy afaka manatanteraka izany izahay manoloana lalana ankehitriny mikasika ny vokatra isan-tokantrano sy ny toe-karenan’ny tantsaha madinika. Mitovy tanteraka amin’ny fananganana ny tobin-drano sy lakan-drano, mila mifandamina amin’ireo mpamboly sy mpiompy isika raha tsy izany tsy hisy olona afaka hanamboatra io fitaritan-drano io. Ambonin’izany, nanimba ny tany koa ny firafitr’ireo trano sy fasana miparitaka etsy sy eroa. Ao anatin’ny fiompina sy fambolena miray ao Isarely dia ny fitambaram-be ny fambolena sy ny fiompiana no hery nanangana ny fantson-drano mitsifitra. Noho izany tsy olana ara-ekonomika, na olana ara-teknika, fa kosa olana eo amin’ny sehatra ambanivohitra.
Krizin’ny tontolo iainana fa tsy hoe akory olana ara-pandrosoana
Kanefa, maneho teboka ny Rivotra anaty Rano (Wind on Water) fa tsy mamaha olana amin’ny tsy fahampianan’ny rano ny vola sy fandrosoana. Betsaka anie ny rano miangona ao ambanin’ny tany e
Niventy ny hira hoe “Ny toe-karenan’ny tantsaha madinika” sy ny “toe-karenan’ny varotra” izahay raha toa ka tsy tsikaritray ny krizin-drano izay efa mandindona ny fiainanay. Manohy milaza ny tompon’andraikitra ao amin’ny governemanta fa manana ny vola isika, homentsika vola ny tantsaha mba hanampiana azy amin’ny fitadiavan-drano. Mbola lazain’izy ireo fa tsy mahavaha olana ny vola. Vao maika aza mampitombo ny aretin’ny olana ny vola, ary mampitombo ny hafainganam-pandehan’ny fisitonan-drano miala ao amin’ny tobin-drano natoraly izany. Manimba ny ain’ny olona ny firehan-kevitra vola.
Tamin’ny taona lasa nandritra ny fotom-pankalazana ny lohataona, dia nodarofan’ny tafiotran-dranomandry (tempete de neige) henjana ny faritra atsimon’ny tany Sinoa, avy eo nitohizan’ny horohoron-tany indray, ary amin’ity taona ity dia haintany indray koa. Mahotra ny vahoaka fa mety hisy koa loza hafa handimby. Nisy bolongana mandehandeha ao amin’ny aterneto izay milaza fa mety ho famantarana ny fisian’ny horohorontany misesisesy ity haintany ity. Naka ny dikan’izany ho ao anatin’ny blaoginy i Littlepjy